तनहुँ प्रहरीको संरक्षणमा मिनी क्यासिनो ! प्रहरीकै सेटिङमा चल्छ धन्दा, अझै भेटिएनन् मोस्ट वान्टेड - Gandak News
तनहुँ प्रहरीको संरक्षणमा मिनी क्यासिनो ! प्रहरीकै सेटिङमा चल्छ धन्दा, अझै भेटिएनन् मोस्ट वान्टेड
गण्डकन्यूज द्वारा ६ कार्तिक २०७६, बुधबार १३:२३ मा प्रकाशित
जहाँ प्रहरी प्रशासन बलियो छ त्यहाँ विधिको शासन, जहाँ विधिको शासन चल्छ त्यहाँ सुशासन । राज्यकोषबाट तलव भत्ता सुविधा खाएर शान्ती सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्न पठाइएका खटाइएका प्रहरीहरुले विधिको साशन छोडेर सजिलै कमाउधन्दा तिर लागेपछि नागरिकले कसको भर पर्ने ? यो एउटा यक्ष प्रश्न तेर्सिएको छ राज्य माथि तनहुँ प्रहरीको सन्दर्भ ।
कुरा मिलेपछि मुद्दा चल्ने कुरै टुङ्गिएको छ । तर, रकमको मोलमोलाइमा तर पनि रकमको मोलमोलाइमा भएका गुह्य धन्दाले प्रहरीको साख गिराएको छ । ति केटीहरु होटलको कोठीमा किन आए उनिहरुको धन्दा के हो ? कसले परिचालन गर्छ, गाँजा वरामद भएको छ त्यो कसले सेवन वा कारोवार गर्छ भन्ने प्रश्न निरुत्तरीत वनेको छ । तनहुँ प्रहरीका पछिल्ला काण्ड छताछुल्ल हुदै गएको छ । आइजी साहेवको गृह जिल्ला किन निकम्वा वन्दै गएको छ । नक्सालको निर्देशन तनहुँमा किन पुगेन ? सेवा निवृत्त हुदै गरेका डिआइजी विनोद शर्मा घिमिरे आफै विवादित वनेका हुन् यसले पनि सकृय पुलिसिङको अभाव महसुस गरिएको छ ।
पोखराबाट साप्ताहिक रुपमा प्रकाशित हुने ‘सराङकोट साप्ताहिक’ ले खबर लेखेको छ ।
गाउँ डुल्ने धर्मगुरुको कोरोनाका कारण मृत्यु,…
कोरोनाबाट संसारभरी संक्रमितको संख्या साढे ६ लाख…
पुरै होटल बुक गरेर २० जना प्रेमिकासँग जर्मनीमा…
भुटानमा पनि ‘लकडाउन’ को अवधि बढाएर २१ दिने बनाइयो
कोरोना आशंका गरिएकी भारतबाट फर्किएकी युवतीको वीर…
च्याम्पियन्स लिग र युरोपा लिग…
क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा के फरक छ ? के…
माछा मार्ने क्रममा पर्वतमा एक जनालाई…
कोरोनाका कारण विश्वभर २० हजार बढीको…